उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र निर्माण रोकेको छैन : राष्ट्रसंघ- विश्व - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १९, २०७५ रोयटर्स
न्युयोर्क — राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धका बाबजुद उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । करिब ६ महिना लामो अध्ययनपछि शुक्रबार राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा बुझाइएको एक गोप्य अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन विभिन्न स्वतन्त्र विज्ञहरुले राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेपछि तयार पारिएको हो । स्वतन्त्र विज्ञहरूको समूहले उक्त गोप्य अध्ययन प्रतिवेदन सुरक्षा परिषद्लाई शुक्रबार बुझाएको हो ।
‘उत्तर कोरियाले आफ्ना परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमहरू रोकेको छैन र राष्ट्रसंघको प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी रूपमा जहाजबाट पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसार बढाउनुका साथै सन् २०१८ मा कोइला ओसारपसार गरेको छ,’ प्रतिवदेनको पृष्ठ १४९ मा उल्लेख छ ।
यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनबारे राष्ट्रसंघका लागि उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिले भने प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उत्तर कोरियाले सिरियासँग सैनिक सहकार्य गरेको तथा यमनका हुथी विद्रोहीलाई हतियार बेच्ने प्रयास गरेको पनि उल्लेख छ ।
प्रतिवदेनका अनुसार उत्तर कोरियाली ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माणमा संलग्न प्राविधिकहरुले सन् २०११, २०१६ र २०१७ मा सिरियाको भ्रमण गरेको समेत उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा यमनका हुथी नेताले सन् २०१६ को जुलाई १३ मा उत्तर कोरियालीलाई लेखेको पत्रसमेत प्राप्त भएको थियो । पत्रमा हुथी नेताले उत्तर कोरियाली प्राविधिकलाई ‘हतियार निर्माणको प्रविधि र आपसी सम्बन्धबारे छलफल गर्न सिरियाको राजधानी दमास्कसमा भेट्न’ प्रस्ताव गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, प्योङयाङले जहाजबाट गैरकानुनी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको ओसारपसारलाई ‘व्यापक रूपमा बढाएको’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । गत साता अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले ट्रम्प प्रशासनसँगको न्यानो सम्बन्धका बाबजुद उत्तर कोरियाले नयाँ ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रको विकास गरिरहेको जनाएका थिए ।
यसअघि ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिएको स्थानमै त्यस्तो गतिविधि जारी राखेको जासुसी भूउपग्रहबाट थाहा भएको अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै दि वासिङटन पोस्टले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनबीच गत जुन १२ मा सिंगापुरमा ऐतिहासिक शिखर बैठक भएको थियो । बैठकमा ट्रम्प र किमबीच कोरियाली द्वीपलाई नि:शस्त्रीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।
त्यसपछि ट्रम्पले उत्तर कोरियाबाट ‘अमेरिकालाई परमाणु हतियारको कुनै पनि खतरा नरहेको’ बताएका थिए । तर प्योङयाङको परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम रोक्ने विषयमा कुनै ठोस प्रक्रिया र प्रतिबद्धताबिना सहमति गरेको भन्दै ट्रम्पको आलोचना भएको थियो ।
परमाणु तथा क्षेप्यास्त्र कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरियाले कैयौं प्रतिबन्ध झेलिरहेको छ । उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया तथा चीनले आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रसंघले प्योङयाङमाथि सन् २००६ यता कोइला, फलाम, कपडा, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ ।
ट्रम्प र किमबीचको सिंगापुर बैठकपछि उत्तर कोरियाले औपचारिक रूपमा चीनलाई आफूविरुद्ध लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको थियो । तर चीनले भने हालसम्म पनि केही प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ २०:३१
श्रावण १९, २०७५ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — असार तेस्रो सातायता शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल आउने स्क्रब टाइफस बिरामीको संख्या २७ पुगेको छ । यिनमा २० महिला र सात पुरुष छन् । यो संख्या भदौसम्म अझ बढ्न सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
संक्रमितमा कडाखाले टाउको दुखाइ, सास फेर्न गाह्रो हुने, १०३/१०४ डिग्रीसम्म ज्वरो आउने, जीउ दुख्ने, आँखा हल्का रातो हुने, पसिना बढी आउने, लिम्फ ग्रन्थी सुन्निनेजस्ता लक्षण देखिने डा. शेरबहादुर पुनले जानकारी दिए । पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी संक्रमण साउन र भदौमा देखिने गरेको छ ।
स्क्रब टाइफस ‘रिकेटसिया’ जीवाणु संक्रमित सूक्ष्म किरा (माइट) को टोकाइबाट फैलिन्छ । यो किरा मुख्यत: खेत, झाडी र घाँसमा रहने मुसा प्रजातिको जीवमा पाइन्छ ।
सात महिनायता मुलुकका २७ जिल्लामा स्क्रब टाइफस देखिएको इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले जनाए । यिनमा ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, झापा, बारा, रौतहट, सर्लाही, चितवन, धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, रामेछाप, बाग्लुङ, कास्की, स्याङ्जा, अर्घाखाँची, बाँके, बर्दिया, गुल्मी, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, प्यूठान, रूपन्देही, दैलेख, बझाङ, कैलाली छन् ।
स्क्रब टाइफस संक्रमण आशंका गरिएका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोगशाला प्रतिवेदन आउनुअघि नै एन्टिबायोटिक दिन सक्ने डा. लाल बताउँछन् । ‘यस्ता बिरामीलाई ‘डक्सिसाइक्लिन’ वा ‘टेट्रासाइक्लिन’ तथा एन्टिबायोटिकका माध्यमले उपयुक्त उपचार गरिए ४८ घण्टाभित्रै सुधार हुन थाल्छ,’ उनले भने ।
चिकित्सकका अनुसार बेलैमा उपयुक्त उपचार नपाउँदा जटिलता निम्तिन सक्छ । बिरामीमा दीर्घकालीन रूपमा श्रवण क्षमता गुम्ने, न्यून रक्तचाप, अंगमा क्षति, मृगौला फेल हुने, निमोनियाँजस्ता सेकेन्डरी ब्याक्टेरियल संक्रमण, छारे रोग, सुस्ती, मासु कुहिनेजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तत्काललाई रोग निको भए पनि भविष्यमा देखिन सक्ने दीर्घकालीन समस्या टार्न बिरामीले केही महिना नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने डा. लालले बताए ।
बेलायतस्थित नेसनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) का अनुसार रिकेटसिया संक्रमित जुम्राको टोकाइबाट समेत स्क्रब टाइफस हुन सक्छ । यो जुम्रा संक्रमित भइसकेकाहरूको शरीरमा हुन्छ । ट्रेन, बस, पार्क, सार्वजनिक स्थलमा सुत्नेहरूमा पनि हुन सक्छ । रिकेटसिया संक्रमित सुल्सुले, उपियाँ वा सूक्ष्म किराको टोकाइबाट पनि यस्तो संक्रमण हुन्छ ।
१०२/१०४ सम्मको कडा ज्वरो
प्रकाशित : श्रावण १९, २०७५ २०:२८